काठमाडौमा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा, यस्ता थपिए नयाँ नियम - संदेश पत्र
आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौलासहित तीनजना प्रहरी हिरासतमा
घट्यो सुनको मुल्य, प्रतितोला कति ?
चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना
१भोलिदेखि टुटल र पठाओ सेवा पनि सञ्चालन
२युरोकप फुटबलमा इटाली समूह विजेता, हारेको वेल्स अन्तिम १६ मा
३आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौलासहित तीनजना प्रहरी हिरासतमा
४खाने तेलको मूल्य घट्यो
५पत्रकार परिचयपत्र दुरुपयोग रोक्न माग
६आज बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
७बाढी पीडितको लागि करिश्मा मानन्धरको एक लाख सहयोग
८घट्यो सुनको मुल्य, प्रतितोला कति ?
काठमाडौमा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा, यस्ता थपिए नयाँ नियम
२०७८ जेष्ठ १९, बुधबार (३ हफ्ता अघि)
काठमाडौ । उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप गर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलवार नै ड्राफ्ट गरिएको निर्णय बुधवार बसेको बैठकले औपचारीक रुप दिएको हो । काठमाडौँ,भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बुधवार निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेका हुन् । निर्णय अनुसार अब जेठ महिना भरी नै निषेधाज्ञा रहने छ । निर्णयमा अबजेठ ३१ सम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु हुने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
वैशाख १६ बाट जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै जेठ १४ बाट सो आदेशलाई थप कडा पारिएको थियो । तर पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञामा भने केही परिवर्तन गरिएको छ । जेठ १४ बाट उपत्यकामा बन्द गरिएको खाद्यान्न,किराना तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ । अब किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान ९ बजेसम्म संचालन गर्न पाइन् छन् । तर त्यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ ।
बैठकमा काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली,भक्तपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला सहभागी थिए । सार्वजनिक निर्माणलाई खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक निर्माण बन्द हुँदा सामग्री ढुवानीका सवारी–साधन पनि रोकिएका थिए । निर्माण सामग्री रातको समयमा मात्र ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।